जमाल खशोग्जी हत्याः साउदी राजकुमारको अमेरिकामा भव्य स्वागत, किन फेरियो अमेरिकी नीति - Aadil Times
जमाल खशोग्जी हत्याः साउदी राजकुमारको अमेरिकामा भव्य स्वागत, किन फेरियो अमेरिकी नीति
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार १२:२३ | Aadil Times
अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि जो बाइडनले पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्यामा साउदी अरबको भूमिकाको आलोचना गरेका थिए। राष्ट्रपति बनिसकेपछि गत फेब्रुअरी महिनामा उनले अमेरिकी गुप्तचर निकायलाई त्यस घटनामा साउदी युवराजप्रति सन्देह प्रकट गरिएको एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अनुमति दिए।
साउदी राजगद्दीका उत्तराधिकारी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले खशोग्जीको हत्यामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका थिए।
तर राष्ट्रपति बनेको छ महिना नपुग्दै बाइडनबाट मोहम्मद बिन सलमानका भाइ राजकुमार खालिद बिन सलमानले भव्य स्वागत पाएका छन्। उनी साउदी अरबका उपरक्षामन्त्री पनि हुन्।
पत्रकार जमाल खशोग्जीको अक्टोबर २०१८ मा हत्या भएपछि साउदी अरबबाट अमेरिकाको भ्रमण गर्ने उनी सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुन्।
लन्डनस्थित थिङ्क ट्यान्क रोयल यूनाइटेड सर्भिसेज इन्स्टिट्यूटसँग सम्बद्ध प्राज्ञ माइकल स्टीभन्स भन्छन्, “युवराज सलमान तथा साउदी अरबको छवि पुनः स्थापित गर्न ठूलो प्रयास गरिएको छ।”
उनका अनुसार त्यसका लागि अहिले साउदी अरबले आर्थिक अवसरहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ। “अनि क्षेत्रीय सुरक्षाबारे उनले भन्ने गरेका उग्र कुराहरू अहिले मन्द बनाइएको छ।”
के युवराजले क्षमा पाएका हुन्?
के यसको अर्थ पश्चिमा विश्वले मोहम्मद बिन सलमानलाई क्षमा दिएको हो त?
होइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले त झन् हुँदै होइन।
तिनले खशोग्जी हत्याकाण्डबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने र युवराज मोहम्मद बिन सलमान पनि त्यसको दायरामा पर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
अक्टोबर २०१८ मा १५ जना साउदी अधिकारीहरू दुईवटा सरकारी विमानमा चढेर इस्तानबुल गएका थिए। त्यहाँ साउदी वाणिज्य दूतावासमा उनीहरूले युवराज मोहम्मद बिन सलमानका प्रखर आलोचक पत्रकार जमाल खशोग्जीलाई ढुकेर बसेका थिए।
उनी त्यहाँ आइपुग्नासाथ उनीहरूले खशोग्जीलाई नियन्त्रणमा लिएर उनको प्राण जानेगरी घाँटी थिचे। त्यसपछि उनीहरूले उनको शरीर टुक्राटुक्रा पारेर नष्ट गरिदिए।
साउदी अरब र अमेरिकाको के हो वास्तविक अवस्था?
अमेरिकाले भव्य स्वागत गरेका राजकुमार खालिद बिन सलमान उक्त घटना हुँदा अमेरिकाका लागि साउदी राजदूत थिए। पहिला उनले खशोग्जीको हत्या भएको दाबी “पूर्णतया असत्य र आधारहीन” भएको बताएका थिए।
तर टर्कीले साउदी वाणिज्य दूतावासमा भएको घटनाबारे जानकारी दिएपछि साउदी नेतृत्व आफ्नो दाबीबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो।
उसले “छाडा एजेन्टहरूले उक्त घटना गराएको” अर्को दाबी गर्दै एउटा गुप्त सुनुवाइपछि केही कनिष्ठ अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
राजकुमार खालिद बिन सलमान अक्टोबर २०१८ पछि अमेरिका जाने सबैभन्दा वरिष्ठ साउदी अधिकारी हुन् (फाइल तस्बिर)
तर अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर निकाय सीआईएले उक्त घटना राजकुमार खालिद बिन सलमानको जानकारीबिना हुनै नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
अमेरिकाले ७० जनाभन्दा बढी साउदी अधिकारीहरूलाई मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा प्रतिबन्ध लगायो।
पश्चिमा देशका नेताहरू खशोग्जी हत्याकाण्डपछि राजकुमार खालिद बिन सलमानबाट टाढै बसेका छन्।
तथापि पश्चिमा देशहरूले साउदी अरबलाई आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार, इरानी विस्तारको सन्दर्भमा एउटा बलियो पर्खाल, एउटा उल्लेख्य व्यापारिक साझेदार तथा हतियारको ठूलो ग्राहक अनि खनिज तेलको बजारमा स्थिरता कायम राख्ने प्रभावशाली पक्ष मानेका छन्।
यहीँनिर “व्यावहारिक राजनीति”ले सुटुक्क प्रवेश गर्छ।
युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार सार्वजनिक रूपमा उनीसँग दूरी कायम गर्ने पश्चिमा देशको भनाइ र साउदी अरबसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने वास्तविकताबीच ठूलो खाडल छ।
युवराज मोहम्मद बिन सलमान साउदी अरबमा सर्वेसर्वा मानिन्छ (फाइल तस्बिर)
तसर्थ युवराज मोहम्मद बिन सलमानका भाइले गत साता अमेरिकाका सरकारी कार्यालयहरूमा स्वागत पाए।
साउदी राजकुमारले अमेरिकामा के गरे?
द्विदिवसीय भ्रमणका बेला राजकुमार खालिद बिन सलमानले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कन, राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभन, रक्षामन्त्री लोयड अस्टिन तथा सेनाका वरिष्ठतम अधिकारी चेअरम्यान अफ जोइन्ट चीफ्स जेनरल मार्क मिलिसँग भेटघाट गरेका थिए।
उनले भेटेका अधिकारीहरूको नामावलीबाट नै अमेरिकाले साउदी अरबलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। अझ विशेष कुरा के हो भने राजकुमार खालिदको भ्रमणबारे पहिला घोषणा नै गरिएको थिएन।
उनको भ्रमणका बेला साउदी अरबले यमनमा जारी युद्धसहित विभिन्न विषयहरू उठायो।
इरानले समर्थन गरेको हूथी विद्रोहीलाई पराजित गर्न नसकेपछि साउदी अरबले अमेरिकी सहयोग खोजेको देखिन्छ।
ऊर्जा, तेल बजार, होर्न अफ अफ्रिका भनिने क्षेत्रमा सुरक्षाव्यवस्था तथा इरानसँग गरिएको आणविक सम्झौता बिउँताउने विषयबारे पनि छलफल भयो।
त्यसबाहेक ठूलो सङ्ख्यामा अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोडेको विषय तथा तालिबानले शासन लिन सक्ने तथा अलकायदाको क्षमता विस्तार हुन सक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भयो।
साउदी अरबसँग परिचित कूटनीतिज्ञहरू कहिलेकाहीँ उक्त राज्यसँग व्यवहार गर्न कठिन हुने बताउँछन्।
पश्चिमा देशहरू सम्भवतः युवराज मोहम्मद बिन सलमानप्रति सधैँ शङ्कालु रहलान्।
“मोहम्मद बिन सलमानका लागि स्थिति अझै सामान्य भइसकेको छैन,” माइकल स्टीभन्स भन्छन्।
उनका अनुसार पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई पूर्ण व्यवहार गर्न थप समय चाहिन्छ। “तर उनको पक्षबाट स्थितिमा सुधार भइरहेको छ। अनि सम्भवतः समयक्रममा उनले फेरि पाश्चत्य देशको भ्रमणमा जान पाउनेछन्।”